Saamaynta Wareejinta Hantida Dawladu Ku Keento Wada-Jirka Bulshada iyo Amaanka. Qalinkii Mohamed Cali
Saamaynta Wareejinta Hantida Dawladu Ku Keento Wada-Jirka Bulshada.
Dawladnimadu waa wax wada lahaansho iyo wax wada yeelasho ummadi leedahay.
Wada-jirka ummaduna waxa laga dheehan karaa hadba sida ay ummadu u aaminsantahay inay wax wada leedahay.
Bulshaba bulshada ay ka ogtahay inay wax wada leedahay ayay ka midaysantahay.
Hadaba maxaa dhaca marka hanti iyo ilo dhaqaale oo dawlad lahayd laga iibiyo oo laga dhigo hanti gaar ah oo dhawr qof ama shirkadi leedahay?
Waxa markiiba dhaca in aan bulshadii hantidaasi ka dhaxeysay ay noqdaan qaar aan u sinayn. Mulkiilayaasga cusubina waxay bilaabaan inay ka dhigaan meherad macaash laga doono, halkii markii hore ay ahayd mid dadka loogu adeego.
Dhanka kale dawladuhu shaqooyinka ay qabtaan waxa ka mid ah shaqo abuurid ay muwaadiniinteeda u samayso shaqooyin ay nolol maalmeedkooda ku dabaraan. Hadii dawladu iibiso hantideeda iyo ilaheeda dhaqaale sidee ayay shaqo ugu abuuri kartaa dadkeeda?
Mida kale hadii aanay dawlada gacanta ku hayn ilaha dhaqaale ee wadanka sidee ayay usoo geli kartaa lacag adag oo ay bulshada ugu dhisto wadooyin, iskuulo iyo cisbitaalo amaba mushaho hagaagsan u siiso shaqaalaheeda?
Ma aha siyaasad shaqaynaysa in dhawr qof oo ummada kamid ahi yeeshaan dhamaan ilaha dhaqaale ee bulshada ka dhexeysay. Waayo in nin ganacsade ah loo shaqeeyo halkii wadanka loo shaqayn lahaa waxay keentaa kala saren bulsho iyo burbur ku yimaada midnamada dadka.
Ganacsiga xorta ahi waa muhiim laakiin hadii ganacsadayaashu qaataan hantidii ummada ka dhexeysay ummadii maxaa ka dhexeynaya ee isku haynaya?
Maanta dalal badan oo wadanka Ingiriisku ku jiro oo hore u xaraashay hantidii ummada ka dhexaysay waxay siyaasiyiintoodu balan qadayaan inay dib gacanta dawlada ugu soo celiyaan ilahii dhaqaale, shirkadihii, dhulkii, biyahii, diyaaradihii hore ay u wareejiyeen.
Tusaale ahaan wadanka Ingiriiska waxa la wareejiyey:
Shirkada diyaaradaha ee British Airways
Xageena hadaynu soo eegno dawlada SL waxay wareejisay dekedii iyo haamihii. Haamihii hadana dawladu waxay garawsatay in lasoo celiyo halka dekedii ay adkaatay heshiiska ay galeen oo aan la arag awgeed.
Siday ila tahay waxaan leeyahay dawladu intii horena hasoo celiso, hanti iyo shirkado dawladu leedahay oo ummada ka dhexeeyana ha abuurto. Weliba baadhis halagu sameeyo baarlamaankii gacanta iska taagay.
Xigasho boga wise man